Ogaden News Agency (ONA) – Qaxootigii Somaliyeed oo Dib Ugu soo Noqonaya Xeebaha Somaliya
Qaxootigii Somaliyeed oo Dib Ugu soo Noqonaya Xeebaha Somaliya
Posted by ONA Admin	/ April 12, 2015
Saraakiisha UNHCR ayaa sheegay inay Qaxootigii joogay dalka Yemen ay ka kala yaacayaan, ka dib markii uu joogsaday maceeshadii la siin jiray isla markaana ay halis weyn gashay nabad-galyadoodii.
Qaxooti Somaliyeed oo lagu qiyaasay 250, 000 ayaa daganaa xeryaha qaxootiga iyo magaalooyinka Sanca iyo Cadan, kuwasoo hadda qaarkood ay dib ugu noqdeen Somaliya iyagoo doomo usii raacay oo ka dagay Boosaaso iyo Berbera.
Nin u hadlay UNHCR ayaa sheegay in 10kii maalmood ee lasoo dhaafay ay 900 dad gaadhaya ay ka kala dageen Jabuuti, Boosaaso iyo Berbera.
Cabdulaahi Xaashi oo ah Wasiir Ku-Xigeenka Arimaha Gudaha ee Puntland ayaa isaguna sheegay inay yimaadeen 260 qof oo saaran doon kuwaasoo u badnaa dumar iyo caruur. Wuxuu intaa raaciyay in dadka qaxootiga ahaa ee kasoo noqday dalka Yemen ilaa hadda soo gaadhay Boosaao ay gaadhayaan 420 qof.
Waxaan la soconaa inay ku jireen xeryaha qaxootiga ee dalka Yemen dad badan oo u dhashay Ogadenya oo kasoo cararay gumaadka ka socda Ogadenya iyo cadaadiska maamulada Somaliyeed ee u adeega gumaysiga, kuwaasoo aan haysanin meel ay ku noqdaan. Waxaa laga codsanayaa jaaliyadaha Somalida Ogadenya inay u gurmadaan dadkaa isla mar ahaantaana gaadhsiiyaan xukuumadaha iyo haya’adaha dalalka ay joogaan xaaladda ay ku sugan yihiin qaxootiga Ogadenya.